Daawo Sawirada : C/weli gaas oo kormeeray Jaamacadaha Boosaaso December 9, 2013 8:08 am
Daawo Video qosol leh : Tima Jare iyo Nin Bidaar leh
Sarkaal ka tirsan AMISOM oo xalay lagu dilay Baledweyne
Tooshka Warqaad: Xildhibaan Feysal maxaa loo dilay? Danta dalka iska daa!
XOG RASMI AH: Ra’iisul wasaaraha waa nin ceynkee ah? xaqiiq dhab ah
Waa tuma cidda ka dambeysa amni xumada Puntland? Walaac la qabo
Jamaal Barrow oo qaabilay sarkaal ka socda dowladda Japan .
Aqri magacyada xildhibaanna maanta is-feeray kadib dood dhex martay
Warmurtiyeed kasoo baxay shirka dib u heshiisiinta mudulood (SAWIRO)
AMISOM oo miino isku qarxiyay iyo ciidan wax uga noqday
Aqri waxyaabaha sababay in Axmed Godane uu Shabaab hogaamiyo
Muuqaal: Tababar kii ugu qatarta badnaa oo laba nin ay qaadanayaan
Ahlu Sunna oo weerartay saldhig Al-Shabaab ay ku lahaayeen Gedo
Soomaali xubin ka noqday guddiga iskuullada Minneapolis
Madaxweyne sheegay in dalkiisa lala maamulo!!!
Qaraxyo lagu baaba’ay oo ka dhacay………..
Amin Arts oo sawir gacmeed ku garaacay Somaliland & Puntland (SAWIR)
Sarkaal ka tirsan AMISOM oo xalay lagu dilay BaledweyneDHAGEYSO: Sarkaal jooga Garbahaarey oo ka warramay dagaalkii shalayTooshka Warqaad: Xildhibaan Feysal maxaa loo dilay? Danta dalka iska daa!
Tooshka WarqaadTooshka Warqaad: Xildhibaan Feysal maxaa loo dilay? Danta dalka iska daa! XOG RASMI AH: Ra’iisul wasaaraha waa nin ceynkee ah? xaqiiq dhab ah DAAWO: Xuska maalinta Qowmiyadaha Itoobiya oo si weyn loo xusay! Waa tuma cidda ka dambeysa amni xumada Puntland? Walaac la qabo Somaliland oo bahdil loogu geystay shirkii qowmiyadaha Itoobiya Agaasimihii hore ee Nabad Sugidda oo war la yaab leh ka dhawaajiyay!!! Wasiir guuleed & Odayaasha beesha habar gidir oo kulan wada qaatey Arimaha BulshadaDHAGEYSO: Sarkaal jooga Garbahaarey oo ka warramay dagaalkii shalay DAAWO: Xuska maalinta Qowmiyadaha Itoobiya oo si weyn loo xusay! Tufaaxa iyo xanjadda oo la sheegay inay ilkaha cadeeyaan Xildhibaan Muuse Sheekh “Waxaan u taaganahay xilka RW xukuumada” Sideed ku Cafin Laheyd Saaxiibtaa ama Saaxiibkaa Qalad kaa Galay? DAAWO: Taleex oo haawaneysa iyo dadkii oo weli ku laaban – Rasaas daadsan. Nin Soomaali ah oo lagu qabtay isagoo kufsanaya gabar meyd ah Daawo: Musharrixiin cambaareysay qaraxii ka dhacay Boosaaso. DEG-DEG: Hoggaamiyihii geesiga ahaa ee Mandalle oo geeriyooday! DHAGEYSO: Saraakiisha Amniga Kismaayo oo ka hadlaya xaaladda amni visitor activity monitoring